NDIRI murume wechidiki ane makore 33 | Kwayedza
NDIRI murume wechidiki ane makore 33
31 Jul, 2014 - 07:07	 2014-07-31T07:47:44+00:00 2014-07-31T07:47:44+00:00 0 Views
NDIRI murume wechidiki ane makore 33 ndinotsvagawo musikana wekuroorana naye. Ndifonerei pa0783 221 988.
Ndiri mukomana ane makore 20 ndinotsvagawo musikana ari kuda zvemba ane makore 18-21. Vanoda ndibatei pa0782 153 799.
Ndiri mudzimai ane makore 24 nemwana mumwe chete ndinotsvakawo murume ari pachokwadi chekuroora, asina chirwere uye asinganetsi. Ngaave ane makore 27-35 akarongeka. 0716 398 054 ndidzo nhare dzangu.
Ndiri murume ane makore 30 ekuberekwa ndinotsvagawo shamwarikadzi yakavimbika, ndine vana vatatu uye ndinogara muHarare. Ndibatei pa0779 646 740.
Vese vachiri kufona pa0776 349 617 chiregai ndakamuwana wangu ane rudo.
Ndiri mukadzi ane makore 30 nemwana 1 ndiri kutsvagawo murume wekushamwaridza naye ane makore 35-40, anoshanda uye anonamata. Nhamba dzangu 0733 727 672.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvagawo musikana wekuMasvingo wekudanana naye kana kushamwaridzana naye. Nhamba dzangu 0778 969 328.
Ndiri mukadzi ane makore 27 nevana vaviri ndiri kutsvagawo murume ane makore 32 kusvika 38 ane vana vaviri. Ndinoda mutema ari negative asi handidi varume vevanhu. Anonamata aine tsika, anodawo nevana vangu ngaandibate chero nguva pa0771 025 762.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 46 ndinotsvakawo murume ane makore 48 kusvika 50, anoshanda uye akafirwa. Ane musha anoda anondibata pa0774 894 910, V Mpofu.
Makadii mose? Ndiri mukadzi ane makore 35 ndinoshuwawo wanano nemurume ane makore 35 kusvika 42 akafirwa nemudzimai kana asina kumboroora. Anopinda chechi yeSDA ngaandibate pa0715 141 793. Ndatenda.
Makadii veKwayedza? Ndakambonyorera asi handina kana kuwana akandifonera. Ndiri murume ane makore 24 nemwana mumwe, ndiri kutsvakawo mudzimai akanaka anozvishandira. Ndibatei pa0783 867 123.
Ndiri murume ane makore 36 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 22-25 asina mwana uye anobva Gokwe. Nhamba dzangu 0779 255 188.
Ndinoda mukadzi ane makore 30 ari pachokwadi nemba kwete vanotsvaga mari. Ndiri mupositori, ndatambura nekuwacha ndega. Nhamba dzangu 0774 615 795.
Ndiri mukadzi ane makore 48 ndiri kutsvagawo murume ane makore 50 zvichikwira asina mudzimai uye anotya Mwari. Nhamba dzangu +27 843 029 279.
Ndinotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 19 ari pachokwadi. Ini ndiri mukomana ane makore 25 uye ndiri negative, ndinoshanda. Ndinobatika pa0776 136 785.
Ndiri mukadzi ane makore 34 ekuberekwa nevana vaviri ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye, handirwari. Vanoda ndibatei pa0771 358 317.
Ndinotsvaga musikana ane makore 18-22 anogara muHarare. Ini ndine makore 25 uye ndinoshandira kuSouth Africa, ndibatei kana paWhatsApp pa+27 743 879 294.
Ndiri mukadzi ane makore 39 ndiri kutsvagawo murume akavimbika kubva pamakore 45 kusvika 70. Ndiri HIV positive nekudaro ndinodawo ari positive. Vanoda ndibatei pa0772 646 563.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 21, akanaka anogeza. Nhamba dzangu 0716 608 703.
Ndiri mukadzi ane makore 44 ndinotsvagawo murume ane makore anotangira pa47 anonamata. Ndinoshanda palodge, ndakamboroorwa ndikabereka vana vaviri vakashaya. Vanoda ndibatei pa0773 913 483.
Kune vaifona pa0738 766 383 chiregedzai zvenyu ndakamuwana wandaida. Tinotenda weKwayedza.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 49 ndinotsvagawo mudzimai anoda zvemba ari pachokwadi, kwete kutambisirana nguva. Ndine vana 4 uye ndinotarisira ane makore 36 kusvika pa40. Nhare dzangu 0776 149 943 asi macall me back kwete.
Ndiri mukadzi ane makore 43 nevana 2 ndinotsvagawo murume anondiroora akazvipira kunoongororwa ropa, ini ndiri HIV negative. Ndakambonyorera asi handina kuwana ari pachokwadi, ndibatei pa0775 796 219 kana paWhatsApp.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 24 ndiri kutsvaga mukadzi ane makore 22 zvichidzika, ari pachokwadi. Nharembozha dzangu 0776 630 109.
Ndiri musikana ane makore 22 ndinotsvagawo mukomana ane makore 22 kusvika 40. Vanoda ndibatei pa0776 595 167.
Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvakawo mudzimai anoda musha anobva kuManicaland. Ndine vana 2 uye ndiri HIV+. Nhamba dzangu 0738 490 506.
Ndiri mudzimai ane makore 38 ndinodawo murume wekushamwaridzana naye anonamata kumasowe ane makore 40 kusvika 50 . Ini ndiri pamushonga saka ndinodawo akaita seni ari pachokwadi. Ndibatei pa0775 682 987, macall me back kwete.
Ndiri mukadzi ane makore 34 nevana vaviri ndinotsvagawo murume ane makore 36 kusvika 45 wekushamwaridzana naye. Mondibata pa0773 938 492.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi akanaka, anotya Mwari, anoda kuchata nekuongororwa ropa aine makore 18 kusvika 21. Nhare dzangu 0779 949 696.
Ndiri murume ane makore 23 ndinotsvakawo musikana wekuroora anoshanda muHurumende. Kana pane anoda nezvangu ngaandifonere pa0782 183 476.
Ndiri murume ane makore 30 ndiri kutsvaga mudzimai wekushamwaridzana naye anoda ngaafone pa 0717285854.
Ndiri mukomana ane makore 34 ndinoshanda, handisati ndaroora uye handina mwana. Ndiri kutsvagawo musikana akavimbika asinawo mwana ave kuda zvemba ane makore 18-30. Vanoda fonai panhamba idzi 0773 228 562.
Ndiri mujaya wemakore 23 ndinotsvagawo musikana wekufambidzana naye ane makore 18 kusvika 22. Fonai pa0714 635 500 asi kwete vanoda kutamba, ndapota.
Ndakambonyorera asi tsamba yangu haina kubuda. Ndiri mudzimai ane 40 nevana 2, HIV+ uye ndiri kutsvagawo murume ane makore 45 zvichikwira. Fonai kana kundibata paWhatsApp pa0772 990 568, matsotsi chimbomirai.
Ndiri kutsvakawo murume ari pachokwadi ane makore 35-38, murefu mushava. Ndakambonyorera ndikasangana nematsotsi .Ngaave anogara muHarare, nhamba dzangu 0715 753 761.
Ini ndiri mukadzi ane makore 23 nevana vaviri ndinodawo murume akavimbika seni anoda ini nevana vangu. Murombo seni zvekuti tinokwanisa kuchengetana. Ane vana vakewo seni ngaandibate pa0733 391 386.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 36 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 24 zvichidzika, kunyanya vasikana vebasa. Ndibatei pa0777 645 875.
Ndiri kutsvagawo mudzimai anoda zvemusha ane mwana wake nekuti ini ndine vangu vaviri. Anenge andifarira ngaandibate pa0779 000 697.
Ndiri kutsvagawo mukadzi ane rudo rwakakwana ane makore 35 zvichikwira. Ndine makore 48, zvizhinji tozotaura. Nhamba dzangu 0771 648 359.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvagawo musikana anoda zvekuroorwa ari pachokwadi. Ndiri muHarare, ndibatei pa0778 930 144.
Ndiri murume ane makore 32 ndakaremara hangu asi ndinozvifambira zvakanaka, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 27 zvichidzika asina chirwere akazvipira kuroorwa. Ndinoda ane rudo rwechokwadi ave kuda zvemba, pfuma ndinobvisa. Anondida ngaandibate pa0715 454 955.
Makadii zvenyu? Ndiri mukadzi ane makore 26 nevana vaviri ndiri kutsvaga murume wekushamwaridzana naye ari HIV negative. Nhamba dzangu idzi 0715 607 358, masms kwete.
Makadii? Ndinotsvakawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 23 kusvika 35 asina mukadzi. Ndinoshandira kuSouth Africa, nhamba dzangu 0772 598 793.